Umakhi womnyango wase China CPL kunye noMthengisi | UMijiang
Ifestile yebhulorho eyaphukileyo
I-varnish eqinileyo yokubhaka iinkuni zomnyango osicaba
Zinc kunye Steel Fence
Kucingo olubiyele okwethutyana
Izinto ze-CPL luhlobo olutsha lwezinto zokuthambisa iiprofayili kwintengiso okwangoku. It is a uhlobo melamine eqhubekayo izinto elaminethiweyo (usebenzisa iteknoloji yokwenza ibhodi engangenwa), nto leyo ibhodi ibhityile obhityileyo elisezantsi koxinzelelo. I-CPL inomgangatho ophezulu wokuxinana, uxinzelelo oluphezulu lokunxiba, ukusebenza kakuhle komlilo kunye nokusebenza okungangeni manzi. Kwangelo xesha, umphezulu wephepha wenziwe ngefomula ekhethekileyo yokuSETYENZISWA KWENKQUBO, ukuze ibenako ukutyabeka okuhle emva kokufudumeza kunye nokugcwala ngokugqibeleleyo emva kokubumba. IMelamine yimveliso egqityiweyo ye-CPL.
Umbala, umbala kunye nokunxiba ukuxhathisa kwe CPL ukutyabeka umgca kunye nephaneli yomnyango wepaneli yasimahla iyafana, esombulula iziphene zomahluko omkhulu wombala kunye nokunganyangeki ukunxiba ukuxhathisa okubangelwa yimelamine ehambelana nezinye izinto. Ke ngoko, yeyona nto ifanelekileyo yokuhambelana nomnyango we-melamine.
2.Fire ukumelana ixesha elide
I-CPL inomgangatho ophezulu wokuxinana, uxinzelelo oluphezulu lokunxiba, ukumelana nokutsha, ukudangatye kwelangatye, ubungqina bokufuma, akukho mbala kunye nokumelana ekuqaleni. Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokuhombisa kwimarike, ezinje ngepeyinti, ifilimu ye-PVC, ibhodi yepolymer, njl, umphezulu uyakhukuliseka ngakumbi kwaye unqabile nelangatye, ukuze ukuzinza kwemveliso kuphindwe kabini.
Ukusebenza 3.Good ukhuselo lokusingqongileyo
Yinto entsha ekumgangatho ophezulu yokuhombisa kukhuseleko lokusingqongileyo kwintengiso. Imveliso egqityiweyo igqityiwe emva kokutyabeka okanye ukucofa. Umphezulu akufuneki uphinde upeyintwe, nto leyo inciphisa ukonzakala kwe-formaldehyde emzimbeni womntu. Ukusebenza kokukhuselwa kwendalo kungaphezulu, kwaye inqanaba lokukhuselwa kwendalo linokufikelela kwinqanaba le-E0 kusetyenziswa itekhnoloji yelungelo elilodwa lomenzi we "net formaldehyde antibacterial".
Egqithileyo Umnyango weWenqi
Okulandelayo: Ifestile yebhulorho eyaphukileyo
CPL umnyango we-lacquer obhaka
I-TY-2 ipeyinta umnyango
I-TY - 1 ipeyinta umnyango
Umbala oqinileyo opeyintwe emnyango